Mareykanka oo mamnuucay dadka 8-dal, Somalia oo ku jirta & Sudan oo laga saaray – XAMAR POST
Wareegto ka soo baxday Madaxweynaha Dalka Mareykanka DOnald Trump,ayaa lagu manuucay dadka ka soo jeeda waddamada Waqooyiga Kuuriya,Chad iyo Venazuela iyada oo 6dii horena laga reebay Suudaan islamarkaana shanta kale ay sidoodii tahay.
Wareegtada ayaa lagu sheegay in waddamada dambe ay diideen siyaasadda Mareykanka ee dadka gelaya dalkaas oo sheegeysa in dalalka ay ka imanayaan qasab ku tahay in xogta dadkaas ay la wadaagaan dowaldda Mareykanka.
Wareegtadan waxaa ay si rasmi ah u dhaqan geli doontaa 18ka Bisha October ee soo socota,waxaana ay sameyn doontaan muwaaddiniinta ka soo jeeda Soomaaliya,Iraan,Liibiya,Syria,Yemen,Kuuriya,Chad iyo Venazuela.
waxaa lagu sheegay in dalalkan dambe ay ka hor imaadeen dalabka Mareykanka ee xog isdhaafsiga dadka ka soo jeeda ee tagaya Mareykanka iyada oo dalka Venazueal laga mamnuucay dadka qaar gaar ahaa qaar ka mid ah saraakiisha dowladd au shaqeeya.
Waqooyiga Kuuriya aya alagu sheegay wareegtadan in dadka Mareykanka ka aada ay aad u yaryihiin sidaas darteedna aan loo baahneyn .
Arrintan waxaa ay waji kale u yeeleysaa dooddii ahayd in Trump uu bartilmaameedsanayo Muslimiinta oo kaliya iyada oo waddamada qaar ee hadda lagu daray aan Muslim u badneyn,lagana reebay Dalka Suudaan.
Baarlamaanka Soomaaliya oo Diyaarinaya Mooshin ka dhan Imaaraadka